Textile Basic Knowledge (2) - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
4. Common Textile pfungwa:
(1). yakarukwa mirayiridzo, yakarukwa nemicheka yakarukwa mutsvuku arambe achirema - nhungamiro rejira urefu; ichi mutsvuku anonzi inochinjika mutsvuku; uwandu pemavara yakarongwa suduru iri yakarukwa arambe achirema (yakarukwa arambe achirema);
(2). Weft mirayiridzo, weft arambe achirema uye weft mutsvuku arambe achirema - rejira upamhi mirayiridzo; rwebhuruu mune mirayiridzo iyi inonzi weft mutsvuku, uye uwandu pemavara yakarongwa suduru ndiyo weft arambe achirema (weft arambe achirema).
(3). Density - kushandiswa kuratidza kuwanda pemavara por chikwata kureba chomuruki micheka, kazhinji mukati 1 padiki kana 10 masendimita. mureza yenyika yedu iroro kuti uwandu pemavara mukati 10 masendimita rinoshandiswa kureva arambe achirema, asi Whitehead Textile emakambani dzichiri vakajaira kushandisa uwandu pemavara mukati 1 kunanaira unoratidza arambe achirema. Sezvinofungwa nevakawanda kuonekwa, "45X45 / 108X58" rinoreva 45 yakarukwa uye weft nezvitsvuku, pamwe yakarukwa uye weft densities ose 108 uye 58.
(4). upamhi - Chinobudirira rakafara micheka iri kazhinji chinoratidzwa masendimita kana masendimita. Yaiwanzoshandiswa vari 36 inches, 44 inches, 56-60 masendimita zvichingodaro. Dzinonzi rakamanikana upamhi, Svikiro upamhi uye yakafara upamhi azvaitwa. micheka pamusoro 60 masendimita kazhinji kunzi rakafara upamhi jira. nhasi, noupamhi Ultra rakapamhama micheka iri China anogona kusvika 360 centimeters. Upamhi unowanzoonekwa segwapa pashure arambe achirema. Semuyenzaniso, kana upamhi jira anotaurwa 3 inowedzerwa, kufara chinoratidzwa sezvo "45X45masendimitaX58 / 60". ndiko, kufara ndiko 60 inches.
(5). Gravimetric - The kurema rejira Kazhinji giremu pakati uremu jira pa mativi mita. Gravimetric inokosha hwokugadzira indekisi dzakarukwa micheka, uye kurema Micheka yeshinda kazhinji sechinhu chinokosha hwokugadzira indekisi. Denim uremu kakawanda anoratidzwa "oz" (OZ), inova uwandu Oz paminiti mativi kwemba rejira uremu, zvakaita se 7 oz,oz2 oz denim, nezvimwewo.
(6). Mutsvuku värjäys-wokutanga värjäys jira muJapan rinoreva nedanho värjäys mutsvuku kana filament uye raibatanidza pamwe mutsvuku värjäys. mhando iyi rejira anonzi "mutsvuku värjäys jira". The mafekitari kuti pave mutsvuku värjäys uye kurukiswa kazhinji unonzi värjäys mafekitari, akadai majini, uye vakawanda hembe micheka vari micheka zvemachira.
5. Kupatsanura pakati Whitehead Textile micheka:
1. Kupatsanura maererano zvakasiyana kugadzira nzira
(1) dzakarukwa micheka: micheka dzakarukwa rinoumbwa pemavara akaronga vertically, i.e. yakatambarara uye vertically, kurukana pamusoro kuenda apa maererano nemimwe mitemo. Kune denim, brocade, dzomucheka, nezvimwewo.
(2) dzakarukwa micheka: Nemicheka inoumbwa looping pemavara akakamurwa weft knitting uye inochinjika knitting. A. Weft micheka dzakarukwa dziri tikadya weft pemavara kubva weft kutungamirira kushanda tsono ari knitting muchina, zvokuti pemavara vakatsunga kuva denderedzwa sequentially uye kurukana. B. Yakarukwa micheka dzakarukwa wakaumbwa boka pemavara kana mapoka pemavara yakarongwa zvakafanana uye zvokudya kunyika kushanda zvose tsono zviri knitting muchina pakarukwa mirayiridzo, apo wezvamatongerwe denderedzwa.
(3) Nonwovens: Loose fibers vari waakaita kana vaisona pamwe. parizvino, namira uye ponji ndivo nzira mbiri huru. Izvi kugadzira nzira inogona nyore zvikuru izvi, kuderedza mari uye kuvandudza basa yauinayo, uye ane yakafara tarisiro kukura.
2. Kupatsanura kubudikidza mutsvuku zvinhu rejira
(1) Textiles kwakachena: The mbishi zvinhu zviri micheka zvose zvakagadzirwa zvakafanana mhando fibers, akadai donje, shinda, nesirika uye polyester micheka.
(2) micheka dzakadaro: The mbishi zvinhu zviri Mucheka vaviri kana kupfuura siyana fibers, izvo sezvaiita pemavara, akadai polyester-viscose, polyester-acrylonitrile, polyester-donje nezvimwe micheka dzakadaro.
(3) micheka dzakadaro: The mbishi zvinhu zviri Mucheka vari pemavara kuroora nezvezvikwata zviviri fibers, izvo zvabatanidzwa kuumba Dzinogara pemavara, akadai pasi kwakavharwa nenyama polyester filament uye svikiro-urefu kubatane nekuita, polyester sadza filament uye pasi kwakavharwa nenyama polyester filament kubatane nekuita kuti kuumba Dzinogara pemavara, nezvimwewo.
(4) micheka kurukana: The mbishi zvinhu vaviri mirayiridzo mamiriro ine zvakasiyana faibha pemavara, akadai esiriki-rayon kurukana yekare satin, zvinhu zvenaironi-rayon dzakarukwa zvinhu zvenaironi-Cotton kurukana zvinhu zvenaironi uye zvichingodaro.
3. Kupatsanura maererano kana jira zvinhu yakaiswa ruvara kana kwete
(1) micheka White: mbishi zvinhu kuti vasina bleached uye zvemachira vari muzvikamu micheka, izvo zvinonziwo Micheka yakatsvuka sirika kurukiswa.
(2) micheka zvemachira: yakatsvuka zvinhu kana chinoshamisira pemavara pashure bleaching vari muzvikamu micheka, uye sirika micheka vari aizivikanwawo Micheka yaibva.
4. Kupatsanura pakati nganonyorwa Nemicheka
(1) namira jira: Two zvidimbu rejira achitsigirwa mumwe vari waakaita pamwechete. micheka namira, akadai micheka Organic, dzakarukwa micheka, nonwovens, raive nebutiro epurasitiki mafirimu, rinogona kubatanidzwa munzira dzakasiyana.
(2) Kudirana kugadzira jira: The jira yakafukidzwa pfupi uye batana internet Zvinhu Zvisina Basa, iro rine vherevheti maitiro uye dzinogona kushandiswa zvipfeko uye decoration zvinhu.
(3) Furo laminated micheka: Furo mapurasitiki vari vachinamatira yakarukwa kana dzakarukwa micheka sezvo hwaro micheka, kunyanya kushandiswa sezvo chando-uchapupu zvipfeko.
(4) Coated micheka: zvinenge zvakazara polyvinyl chloride (PVC) uye chloroprene rabha pamusoro mujinga rejira kana dzakarukwa micheka, yakanaka isapinda shanda.
Sino-us yekutengeserana kupopota inomhanyisa kugadzirisa kweChina \_ 's machira nemachira ekutumira kunze